Sukur: Noloshayda Waxaan Ku Waayey Mucaaradada Erdogan |
Sukur: Noloshayda Waxaan Ku Waayey Mucaaradada Erdogan
Halyeeyga kubada cagta Turkiga Hakan Sukur ayaa noloshiisa dib u dhisaya isagoo darawal u noqday shirkada taksiga ee Uber.
Weeraryahankii hore ee xulka Turkiga Sukur oo 48 sanno jir ah ayaa ku nool dalka Mareykanka ka dib markii laga soo masaafuriyay dalkiisa madaama uu ka soo horjeestay madaxweynaha Turkiga Recep Edrogan.
Sukur ayaa sheegay in aabihiis isna xabsi la dhigay halka hantidii uu ku lahaa dalkiisa Turkiga la xanibady taasoo keentay inuu u cararo dalka Mareykanka oo uu noloshiisa dib u dhiso.
Waxa uu meel kafeega iyo macmacaanka laga cuno oo lagu magacaabo Tuts uu ka furtay goob ay degan yihiin dadka hodanka ah oo ku taala banaanka magaalada San Francisco ee gobolka California ee dalka Mareykanka.
Laakiin waa la xiray goobtaas bishii December 2018 iyagoo lagu bedelay maqaaxi Turki ah oo uu ninka leeyahay.
Xiddiga ku guuleystay UEFA Cup islamarkaana Turkiga soo gaarsiiyay semi-finalka Koobka Adduuka ayaa yiri: “Waxaan gaari u kaxeeyaa Uber, waxaan sidoo kale iibiyaa buugaagta. Waxaan bilaabayaa inaan shaqeeyo haatan.
“Qof walba oo xiriir ila lahaa dhaqaale xumo ayaa soo wajahday.
“Wax ii haray ma jiraan. Malaayiin doolar oo hanti ah ayaa iga taala Turkiga, laakiin wax walba dowlada ayaa la wareegtay.
“Erdogan ayaa iga qaatay wax walba, xuquuqdeyda xoriyada, xuquuqdeyda hadalka iyo xuquuqdeyda shaqada.
“Goobtii ganacsi ee xaaskeyga waa laga xiray, caruurteyda waa la handaday, aabaheey isna xabsi ayaa la dhigay.
“Markii aan soo aaday Mareykaka, aabaheey waa la xiray, hantideydiina waa la qaatay.”
Sukur ayaa loo arkaa inuu yahay xiddigii ugu weynaa ee kubada cagta Turkiga isagoo dhaliyay 52 gool 112 kulan uu u saftay, waxa uu sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha Inter Milan, Torino, Parma iyo kooxda dalkiisa ee Galatasaray.